iOS 15 Vitaminina FaceTime miaraka amina endrika vaovao mahafinaritra | Vaovao IPhone
iOS 15 Vitaminina FaceTime miaraka amina endrika vaovao mahafinaritra
IOS 15 eto. Nanapa-kevitra i Apple fa ny zava-baovao natolotry ny WWDC 2021 dia ny fanavaozana lehibe indrindra ny rafitra miasa ho an'ny iPhone. Fanavaozana iray izay nifantoka tamin'ny andry fototra efatra izay ny fifandraisana amin'ny hafa, ny tontolo manodidina antsika ary ny fisorohana ny fanelingelenana. Vaovao lehibe atombohy amin'ny switch amin'ny fotoana manampy safidy tena mahaliana izay namboarina mba hitovy lenta amin'ny serivisy antso video hafa.
Hizara ny efijery iPhone-nao amin'ny FaceTime sy iOS 15 ary maro hafa
Manomboka izao, ny antso FaceTime ao amin'ny iOS 15 dia hahazo aina bebe kokoa, voajanahary ary zava-misy. Safidin'ny audio spatial, izay hampidirina ny feon'ny mpandray anjara rehetra ary ho re toy ny hoe tao amin'ny efitrano iray ihany isika, miaraka amin'ny tanjona hampiakatra ny zava-misy amin'ireo antso an-tsary. Voamarika fa nisy fiantraikany teo amin'ny fahazaranay ny areti-mandringana ary naniry hanararaotra izany i Apple.
Safidy iray koa no nampidirina hanafoanana ny tabataba any ivelany na izay manakana antsika tsy ho re tsara, mba hahafahantsika manivana ny feontsika ary hampiakatra azy mazava tsara. Ny feo rehetra dia azo raisina ihany koa Spectrum malalaka, Endri-javatra mahaliana iray hafa amin'ity iOS 15 vaovao ity ao amin'ny FaceTime.
Amin'ny lafiny iray, Ny FaceTime dia lasa toy ny sehatra fiantsoana horonan-tsary. Ny grids dia ampidirina amin'ireo mpandray anjara rehetra izay manasongadina izay miteny amin'ny fotoana rehetra. Ny fomba iray hampanjavozavoana ny fotony dia tafiditra ao koa, izay nantsoin'izy ireo hoe Portrait Mode.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » iOS 15 Vitaminina FaceTime miaraka amina endrika vaovao mahafinaritra